Zeekwat Youtube Channel - Zeekwat Hot News
Sandi Myint Lwin နဲ့ Sophia Everest ကတော့ ဖြိုးပြည့်စုံ တို့ အချုပ်အနှောင်မလွတ်မြောက်ခင်ကထဲက
Sandi Myint Lwin နဲ့ Sophia Everest ကတော့ ဖြိုးပြည့်စုံ တို့ အချုပ်အနှောင်မလွတ်မြောက်ခင်ကထဲက ပြတ်ပြတ်သားသားရပ်တည်ပေးခဲ့ပြီး ယုံကြည့်မှု အပြည့်အ၀ပေးခဲ့သူနှစ်ဦးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံ နဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် လွတ်မြောက်လာတဲ့ နေ့ဘဲဖြစ်လို့ ၀မ်းသာပျော်ရွှင်ရတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်
သီတင်းကျွတ်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ IC Show ကို သွားကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ စ၀်ယွန်းဝတီဦး
သီတင်းကျွတ်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ IC Show ကို သွားကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ သူမကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ မှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်...
လူညီကျစမ်းပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ ဦးတော့
၀ါရင့်သရုပ်ဆောင် ဦးမော့စ် တစ်ယောက် ဘာကြောင့် အကယ်ဒမီ နောက်ဆုံးချိန်မှရခဲ့ရသလဲ
ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံတွေ ဘာကြောင့် သရုပ်ဆောင်ကြေးတွေ နည်းရသလဲ
ထောင်ထဲက ၁၀ ပေပါတ်လည် အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာနေခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ မိုးအောင်ရင်
ထောင်ထဲက ၁၀ ပေပါတ်လည် အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာနေခဲ့ရတော့ မ ကြောက်တက်တော့ပါဘူး သရဲတ စေဆိုတာ အမျှလိုချင်လို့ အရိပ်အ ယောင်ပြတာ ကိုယ်က ကြောက်နေရင် သူတို့ကိုဘာမှလုပ် ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေလို့ပြောပြတဲ့ မိုးအောင်ရင်
YGN Bar ဖွင့်ပွဲကို အမိုက်စား Fashion နဲ့တက်ရောက်လာတဲ့ Thin Zar Wint Kyaw
YGN Bar ဖွင့်ပွဲကို အမိုက်စား Fashion နဲ့တက်ရောက်လာတဲ့ Thin Zar Wint Kyaw ကတော့ သူမရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရှယ်ယာပါတဲ့ Barကို အောင်မြင်စေချင်လို့ပွဲကိုတက်ရောက်လာတာပါလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်
Vivo ဖုန်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို သူမရဲ့ မူရင်းဆံပင်လေးနဲ့ တက်ရောက်လာခဲ့ပြီး အရမ်းလှပတေဲ့ နေခြည်ဦး
Vivo ဖုန်းမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို သူမရဲ့ မူရင်းဆံပင်လေးနဲ့ တက်ရောက်လာခဲ့ပြီး အရမ်းလှပတေဲ့ နေခြည်ဦးကတော့ သူမအပေါ်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကို အခုလိုဘဲတုံ့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ် စိတ်ထားဖြူစင်ရိုးသားပြီး မာန်မာနကင်းတဲ့ သူမကိုဘာကြောင့် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်နေကျလဲဆိုတာ ပရိတ်သက်ကြီးကဘဲ အဖြေရှာပေးကျပါဦးဗျာ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ကိုတာဝန်ယူ ရိုက်ကူးမယ့် အကယ်ဒမီလူမင်း
ဒီလောက်ကြီးလေးတဲ့တာဝန်တခါမှမယူဘူးဘူး ကိုယ်ပခုံပေါ် ကျလာတဲ့ တာဝန်ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးယူချင်တယ်ဆိုတဲ့ အကယ်ဒမီလူမင်း
GAC GS5 & GM6 Lunch Event
GAC GS5 & GM6 Myanmar Launch Event
ဖူးပွင့်သခင် နှင့် ခဏတာ
ဖူးဝတ်နေကျအဝတ်အစားမဟုတ်တဲ့အတွက် ဘာလာလာထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ထားတာ ပရိတ်သက်တွေသထိထားမိတာပါ...ပရိတ်သက်တွေအားလုံး အတွင်း စိတ်နဲ့ဆက်ဆံတာပါ. နေရာမကြိုက်တာချေတာမဟုတ်ပါဘူး လုပ်ပြီးမှနောင်တရမှာဆိုးလို့ပါတဲ့
Ni Ni Khin Zaw နှင့် ခဏတာ
အရမ်းထူးခြားတဲ့သီးချင်ကို တောင်းဆိုတဲ့ ပရိတ်သက်အတွက် လိပ်ပြာဆိုတဲ့သီချင်းကို နားဆင်စေချင်ပါတယ်တဲ့ Arts လုပ်ရတာခက်ပါတယ် အခွေ ဖန်တီးရတာအရမ်းကြာရတာ Feel ကြောင်ကြာတာပါ လမိုင်းမကပ်ရင် ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူး. မကြာခင်မှာလဲဘအခွေထွက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပြီး တကိုယ်တော် Show ကို Mandalay မှာ ကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်.. အပြည့်အစုံညဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်
Beauty Essence 2
ချစ်တို့ရေ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ နာမည်ရ Makeup Artist တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Makeup Phyu Thin မှ ဖက်ရှင်ကျပီး ပွဲတက်ပုံစံလေး လဲဖြစ်မယ့် Golden sexy look ဘိုဆန်ဆန် ပုံစံလေးကို ချစ်တို့ရဲ့ ပွဲတက် နဲ့ ထသွားထလာ တွေမှာ ကိုယ်တိုင် လိမ်းခြယ်တက်စေရန် step by step အဆင့်ဆင့်ပြသ လိမ်းချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ခုအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရူပီး ချစ်တို့ ပြင်ချင်တဲ့ မိတ်ကပ်ပုံစံလေးတွေ ရှိရင် comment မှာ မန့်ပေးပါ
Like and share လေး လဲ လုပ်ပေးပါဦးနော်
" Smart & Cute Makeup Look For Sweetiepie Girls "
ဒီတစ်ပတ် Zeekwat Channel ရဲ့ Beauty Essence ကဏ္ဍလေးကနေပြီးတော့ Smart လည်းကျချင်တယ် .. ချစ်ဖို့လည်းကောင်းချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ညီမလေးတွေ အမတွေ အတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် Makeup Look လေးတစ်ခုကိုပြင်ပြပေးသွားပါ .. အဲ့တာဆို အားလုံး Jang နဲ့အတူတူလိုက်ပြင်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် ..
အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရူပီး ချစ်တို့ ပြင်ချင်တဲ့ မိတ်ကပ်ပုံစံလေးတွေ ရှိရင် comment မှာ မန့်ပေးပါ
ဂေးဂေ နှင့် ခဏတာ
LGBT တွေကိုအတွက်ရပ်တည်ပြီး အားပေးစကားပြေားခဲ့သူကိုယ်တိုင် လိင်တူအချင်းချင်းစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်..
လူမင်း ကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်တာ ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ထားတဲ့ ညစ်တွန်းရုပ်ရှင်ကားကြီး
ကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်တာ ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ထားတဲ့ ညစ်တွန်းရုပ်ရှင်ကားကြီးကတော့ မကြာမှီမှာ ရုံတင်ပြသတော့မှာဘဲဖြစ်ပါတယ်..
ဇာတ်လမ်းကိုကြိုက်လွန်းလို့ ဝယ်ပြီးရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဘာကားတင်တင်လာရောက်အားပေးနေတဲ့ ပရိတ်သက်တွေကိုလဲအားနာလို့ သူရဲ့ကားလေကိုတော့ ကြုံကြိုက်ရင်လာကြည့်ပါလို့ဘဲ တောင်ဆိုခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်
မယ်ဒလင်ဆရာကြီး ဦးကျော်လှိုင်ရဲ့ ဘဝကောက်ကြောင်း..
လွန်ခဲ့တဲ့ဘ၁၅နှစ်ခန့်က လယ်ဧကများစွာ ပိုင်ဆိုင်ပေမယ့် အခုချိန်မှာ မယ်ဒလင်အိုလေးတစ်လုံးရယ်
လယ်ငါးဧကရယ်သာကျန်ရှိတော့ပြီး မထင်မရှာရွာလေးမှာ အခြေချနေထိုင်နေတဲ့ မယ်ဒလင်ဆရာကြီး ဦးကျော်လှိုင်ရဲ့ ဘဝကောက်ကြောင်း..
၁၀နှစ်နီးပါးလောက် ပင်လယ်ပေါက်ပိတ်ထားလို့ လယ်တွေရေကြီးရေလျှံပြီး စီးပွားရေး ပျက်ကပ်ဆိုက်ခဲ့ရပေမယ့် ဂီတရဲ့ နှစ်သိပ့်ပေးမှုကြောင့် စ်တ်ဓာတ်မယိုင်လဲတဲ့ သူတစ်ဦလဲဖစ်ပါတယ်
'Oxford' Land Rover Myanmar
မိုင်ပေါင်း တစ်သောင်းကျော်ကို ရက်၁၀၀ နဲ့ မောင်းနှင်မည့် ၁၉၅၅ ခုနှစ်ထုတ် Oxford Landrover series
စပွန်ဆာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးက Onli ပေါ်မှာ ရေပန်းစား နေတဲ့အပေါ်ဝမ်းသာမိပါတယ် နေတိုး
စပွန်ဆာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးက Onli ပေါ်မှာ ရေပန်းစား နေတဲ့အပေါ်ဝမ်းသာမိပါတယ်.ပိုစတာ Idea ကိုလဲ သဘေားကျနေပါတယ်တဲ့.. အိမ်ထောင်ပြုဖို့ကတော့ Media တွေမဖြေကြားဘူးလို့ အစကထဲ ပြေားထားပြီးသာမို့ မဖြေခဲ့ပါဘူး.. ပရိတ်သက်ကြီးရော နေတိုးအပေါ်အမြင်ဝေဖန်ခဲ့ပါဦး
Beauty Essence Episode 1
ချစ်​တို့​​ရေ ... ဒီတစ်​ပတ်​မှာ​တော့ အရင်​အပတ်​ကနဲ့မတူတဲ့ မိတ်​ကပ်​လိမ်းနည်း​လေးကို တင်​ဆက်​​ပေးသွားပါမယ်​။ အဲ့ဒါက​တော့ ရုံးသွား​နေရတဲ့ မမတို့ ညီမ​လေးတို့အတွက်​ လှလှပပနဲ့ လွယ်​လွယ်​ကူကူ ပြင်​ဆင်​နိုင်​ဖို့ Beauty Essence Program မှ step by step မိတ်​ကပ်​လိမ်းနည်း​လေး​တွေကို တင်​ဆက်​​ပေးလိုက်​ပါပီ။ zeekwat ပရိတတ်​တို့ကလည်း video ​လေးကိုကြည့်​ပြီး ​ဝေဖန်​ပေးကြပါဦးရှင့်​
ခုထိအိမ်ပိုင်ယာပိုင်တောင်မဝယ်ရသေးပေမယ့် မငြီးတော့ပါဘူးလို့ဆိုလာတဲ့ မေပန်ချီ
ခုထိအိမ်ပိုင်ယာပိုင်တောင်မဝယ်ရသေးပေမယ့် ကိုယ့်ထက်ဆိုးတဲ့သူတွေကို အားနာလို့ မငြီးတော့ပါဘူးလို့ဆိုလာတဲ့ မေပန်ချီ.. Video ဈေးကွက်မရှိတော့ ကားရိုက်တွေမရှိတော့ပေမယ့် ခုနောက်ပိုင်းပရိတ်သက်တွေ Quality ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကြည့်ခွင့်ရလို့လဲ ဝမ်းသားနေရှာသူလေပါ..
ပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်ကားကြီးအတွက်အရမ်းရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေရတဲ့သူမကတော့ပုံမှန်ဆိုမျက်နှာအရမ်းပြောင်းတက်ပေမယ့် Press Show နေ့မှာတော့မျက်နှာမပြောင်နိုင်ရှာပါဘူး..စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာ အဖေဖြစ်သူက အကြံညဏ်ပေးအားပေးလို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေ စီးပွားရေးတွေအများကြီးလစ်ဟင်းခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်
တန်ဖိုးဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးရဲ့ မင်းသမီး အေးမြတ်သူ
လူငယ်တွေအတွက်ပညာပေး ရိုက်ကူးထားတဲ့ တန်ဖိုးဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးရဲ့ မင်းသမီး အေးမြတ်သူကတော့ ဇာတ်ကားရိုက်တုန်းက အဖြစ်အပျတ်တွေ အမှတ်တရတွေ ပြေားပြလာပါတယ်..ထူးခြားတာကတော့ ဒီဇာတ်ကားဟာ ကိုရီးယား မြန်မာပေါင်းစပ်ပြီးဖန်တီးထားတာဘဲဖြစ်ပါတယ်
မိန်းကလေးပရိတ်သက်တွေကြား အောင်မြင်နေတဲ့ တေးသံရှင် ဂေဂေး
မိန်းကလေးပရိတ်သက်တွေကြား အောင်မြင်နေတဲ့ တေးသံရှင် ဂေဂေးကတော့ သူငယ်ချင်တွေ စုပေါင်းပြီး သီချင်းအယ်ဘမ်တစ်ခွေ ထွက်ရှိလာပါပြီ..
နိုင်ငံပေါင်း (၂၄)နိုင်းငံက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ ကျတဲ့ Mister & Miss
နိုင်ငံပေါင်း (၂၄)နိုင်းငံက ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ ကျတဲ့ Mister & Miss Toursim and Culture Universe 2019 Grand Final ပွဲကိုမြန်မာပြည်တွင်အိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပပြုလုပ်.
အခုခေတ်အနုပညာလုပ်နေတာ ပေါ်ပင်တွေများတော့ ကောက်ရိုးမီးလိုဘဲ တကယ်ကြိုးစားမှဖြစ်မှာပါဆိုတဲ့ ချောရတနာ
မိဘဆိုတာသားသမီးကို ဘယ်အချိန်မှစိတ်မချပါဘူး.. ကိုယ်သားသမီးတွေက ကိုယ့်ရဲ့ကားတွေကိုလုံးဝမကြည့်တာ အာလောက်အားပေးတာလို့ ရီမေားပြီးပြောခဲ့ပါသေးတယ်...အခုခေတ်အနုပညာလုပ်နေတာ ပေါ်ပင်တွေများတော့ ကောက်ရိုးမီးလိုဘဲ တကယ်ကြိုးစားမှဖြစ်မှာပါ ခဏတော့ပေါ်ပင်ဖြစ်မှာပါလို့ ဝေဖန်ထောက်ပြခဲ့ပါသေးတယ်
Man Of the Global Myanmar 2019 Winner ဆုရှင် Chan
Man Of the Global Myanmar 2019 Winner ဆုရှင်
ဆက်လက်ပြီး နိုင်ငံခြားမှာ ထပ်မံယှဉ်ပြိုင်ရမယ်အတွက် လေ့လာမှုတွေရယ် ဘော်ဒီ Train ရဦးမယ်လို့ပြေားပြလာပါတယ် ဝါသနာကတော့ Game အလွန်အကျွံဆော့တာပါတဲ့....
ခုခေတ် မှာ Mobile Legend တို့ PUBG တို့ အရမ်းဆော့များလာပြီး အလုပ်တွေအတွက် အချိန်တွေ ထိခိုက်လာတာကို သတိထားမိဖို့တော့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် Zeekwat Tv မှ ပရိတ်သက်ကြီး သတိပြုကျပါလို့ စေတနာကောင်းနဲ့ အကြံပြုပါရစေခင်ဗျာ
န်မာကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ ထပ်မံယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသူလေး ပွင့်နဒီဦး
ငယ်စဉ်ကထဲက အနုပညာဝါသနာပါခဲ့ပေမယ့် အိမ်ထောင်ပြုပြီးမှ အိမ်ထောင်ရှင် အလှမယ်ပြိုင်ပွဲ ဝင်ပြိုင်းရင်းMRS ရရှိခဲ့ပြီး မြန်မာကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ ထပ်မံယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသူလေးတစ်ယောက်..
ခင်ပွန်းဖြစ်သူကလဲ အနုပညာအလုပ်ကို သဘောထားကြီးစွာ လုပ်ခွင့်ပေးထားတာလို့လဲသိရပါတယ်..
အဆိုတော်ဂေးဂေး နှင့် ခဏတာ
ရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်မှုတွေအတွက်သဘာပါတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဂေဂေး...တစ်ဦးတစ်ဦးဘေးနာမှာရှိနေတဲ့အချိန် ကူညီပေးကျပါ ဖေးမပေးကျပါ အဲ့လိုဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးကပိုလှပလာမယ်လို့ထင်မိပါတယ်..
Celebrity သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေ ချစ်သူအဖြစ် ရောက်ရှိခဲ့ကြတဲ့ ဆယ်လီအတွဲ (၅)တွဲကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်….
Celebrity ရာထူးကနေထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့ Sulliအကြောင်းကိုလျှောက်ဖွခဲ့တဲ့ မီးသတ်သမား(၂)ဦးအကြောင်း…
Celebrity ခွေးလေးကို ပိုက်ပြီး တမျိုးလေး ကြည့်ကောင်းနေပြန်တဲ့ ပိုင်တံခွန်
Uncategorized Buying Heritable Definition Biology